ATN: December 2007
အိပ်မရတဲ့အတူ မထူးတော့တဲ့ညမို.၊ တံခါးကို၊ ဖွင့်ကာ၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့ခြေလှမ်းရဲ.လျှပ်တိုက်သံ၊ နားကို၊ စွင့်ကာ၊ ရောင်နီ မလာခင် ကျေးငှက်တို.ရဲ.၊ တေးသွားလေးကို စည်းချက်တွက်ကြည့်ကာ၊ ကြားမှာ သံစဉ်ဖြည့်လိုက်တယ်။ သာယာတဲ့ နေ.သစ်ရဲ.အစ တည်ငြိမ်ဆဲ အခိုက်အတန်.မှာ တေးသံကို ရှာဖွေရေးမှတ်ရင်းနဲ့သီချင်းပုံစံ သီကာ ငြည်းမိတယ်။
စိတ်ချတဲ့လူရင်းမို. ဖွင့်ဟကာ၊ မေးမယ်၊ ပြောလေ၊ အားသစ်နဲ.ခြေလှမ်းရဲ.တက်ကြွသံ၊ ကြားရင်၊ သိမယ်၊ တောင်စဉ်ခွန်နှစ်သွယ်လှမ်းတက်ဖို.အတွက်၊ ခရီးကြမ်းလမ်းကို ထိုးဖောက်ရောက်ခဲ့ရင်၊ သင့်ကို၊ ရှေ.မှာ ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်၊ ရင်ဆိုင်မယ့် နေ.မရှိတဲ့ည ငြိမ်သက်ဆဲ အခိုက်အတန်.မှာ ဘေးရန်ကို တင်ကြိုမှန်းဆရင်းနဲ. မြားအိမ်ကို လွယ်ကာ ထွက်ခဲ့တယ်၊
ကျနော်တို.ခေတ်မှာ ခိုင်ထူးဆိုတာ အလွှမ်းမိုးဆုံး အဆိုတော်တဦးပါပဲ၊ သူ.သီချင်းတွေများစွာထဲမှာ ဒီသီချင်းက ကျနော့်တို.ဘ၀တွေနဲ. တူနေတယ်လို. ခံစားရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီသီချင်းကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ဆို တီးခတ်မိတာပါ၊ သီချင်းရေးဆရာက ကိုမောင်မောင်ပါ၊
သီချင်းတပုဒ်လုံးရဲ. အစီအစဉ်တွေကို ကျနော်မမှတ်မိတော့ပါ။ ဒါကြောင့်မို. မှတ်မိတဲ့ အဓိက နှစ်ပိုဒ်ကိုပဲ ပြန်တီးခတ်ထားပါတယ်။
မကြုံစဖူး သူ ဖျားနာသွားခဲ့တယ်၊
အိပ်မက်ထဲမှာ ယောင်ရမ်း လျှောက်လှမ်းနေဆဲ ...
မုန်တိုင်းတွေ ရက်စက် ရယ်မောပြတတ်ရာနေရာ၊
တခုခုကို အမှန်တရား လုပ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်၊
သူ ပြောပြနိုင်တာ နောက်ဆုံး
အလုပ် လုပ်နေရင်း ...
ကား မောင်းနေရင်း ...
ဈေး ၀ယ်နေရင်း ...
သတင်းစာ ဖတ်နေရင်း ...
သီချင်း ငြည်းနေရင်း ...
အိပ် ပျော်နေရင်း ...
ထမင်း စားနေရင်း ...
ရုပ်ရှင် ကြည့်နေရင်း ...
စာ ရေးနေရင်း ...
ဂစ်တာ တီးနေရင်း ...
ရေ ချိုးနေရင်း ...
စိတ် ညစ်နေရင်း ...
သားငယ်လေးကို ရေချိုးပေးနေရင်း ...
တခုခု လုပ်နေရင်း ...
အဖေ ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
အမေ ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
အကိုကြီး ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
ငါ့ညီမလေး ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
သူငယ်ချင်းတွေ ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
သစ်သားခုံတန်းလေးတောင် ငါ့ကို လွမ်းနေမှာ-
အဖေ့ကို လွမ်းရင် ...
အမေ့ကို လွမ်းရင် ...
အကိုကြီးကို လွမ်းရင် ...
ညီမလေးကို လွမ်းရင် ...
သစ်သားခုံတန်းလေးကို လွမ်းရင် ...
ကလေးဘ၀ထဲက ကွဲသွားတဲ့ သူ.မိခင်ကို
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သားပေါက်လေးလို. ခေါ်လေရဲ. ....
ကလေးတယောက်လို ငိုရဲ. ...
ကြယ်ကလေးတလုံးပါ မေမေ ...
အမေ့ကိုလွမ်းတဲ့ မိုးသားတွေဖုံးလို. ...
ကျနော့်ကို လွမ်းနေမလား ...
သေရာပါတဲ့ ဒဏ်ရာနော်)တဲ့ ...
မိခင်နှင့် ချစ်သူတို.၏ မျက်ရည်များ စွန်းထင်းနေသော
ဒါတွေ ကျနော် မကြားချင်တော့ဘူး အမေ ...
အဲဒီလို ပြက္ခဒိန်တွေ ကြုံတဲ့အခါ
နေ.တနေ.ကို ရူးသွပ်မိလို. ....
သူ.ကို မေ့နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိသတဲ့ ...
တောင်ကြားလေးပါ မေမေ -
အဲဒီ့ တောင်ကြားထဲမှာ ...